Haweeney Soomaali Mareykan ah oo Lagu xiray Mareykanka ka dib markii…. – SBC
Haweeney Soomaali Mareykan ah oo Lagu xiray Mareykanka ka dib markii….
Amina Farax Cali oo ah haweeney SOomaali ah oo haysta Dhalashada Mareykanka ayaa Xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ka dhago adeegtay inay soo hor istaagto Maxkamada Dhageysanaysa dhan ah iyada iyo haweeney kale oo lagu magaacabo Xaawo Maxamed Xasan oo loo haysto taageerada Koox argagaxiso ah oo Soomaaliya ka dhisay.
Xirida Haweenaydan Soomaalida ayaa timid ka dib markii Maanta oo isniin ah loo balansanaa in la dhageysto Eedeymaha loo haysto oo ay ka mid tahay inay lacag u uruuriyaan koox argagaxiso ah iyo inay shirar telfoono ku qabteen kuwaasi oo bulshada Soomaalida ee Mareykanka looga dhaadhicinayo Fikirka wax loogu yeeray Jihaadka soomaaliya.
Madaxa Maxkamada Haweenka la saarayay ma sheegin Waqtiga si rasmi ah loo dhageysan doono eedeymaha loo haysto waxaana uu amray oo keliya in la xiro Aamino Faarax Cali oo ka soo horjeesatay dhageysiga dacwadeeda.
Maxkamada Mareykanka ayaa la filan karaa inay dhageysiga Dacwadan Bilowdo Laba todobaad ka dib.
Labada haween ah ee maxkamada lagu soo taagay mareykanka ayaa waxaa ay guud ahaanba horey u dafireen eedeymaha loo jeediyay oo ay ku jirtay in dadka muslimka ah ee mareykanka jooga gaar ahaan soomaalida ay iska iloobaan hayada gargaarka balse ay taageeraan jihaadka.
Kooxda Dacwad oogayaasha mareykanka ayaa maxkamada hor keenay cajalado Telfoon oo laga duubay haweenka kuwaasi oo ay ku jirtyo inay la hadleen mid ka mid ah hogaamiyaasha alshabaab oo warbixin ka siin wararkii ugu danbeeyay ee Dagaalada Dalka Soomaaliya ka socda.
Labada haween ee Dawcad oogayaasha mareykanka ay manta damacsanaayeen in maxkamada soo taagan ayaa ah waxaa mid ka mid ah ay tahay mid da’a ah oo jirta in badan 60 sanno taasi oo loo haysto danuub argagaxiso.
Haweenkan loo haysto eedeymaha inay lacago ugu deeqeen Alshabaab ayaa waxaa hadii lagu helo danbiyadan ay muteysan doonan xabsi dhan 15 sanno.